TV GuideProgram Review
Mandalay FMFM Collection
Home » mandalayfm
မင်္ဂလာရှိသောဆုတောင်းများ ဒီအစီအစဉ်မှာ မွေးနေ့မင်္ဂလာဆုမွန်လွှာတွေနဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် တေးသီချင်းတောင်းဆိုမှုဆုမွန်လွှာတွေကို ပရိသတ်များက ပေးပို့တောင်းဆိုနိုင်တဲ့
Mandalay FM Top Ten Songs ဒီအစီအစဉ်ကတော့ လက်ရှိ Hots ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းတွေကို Online မှ တစ်ဆင့် ပရိသတ်များကို ကိုယ်တိုင် Vote လုပ်ပြီး အများဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့ သီချင်း ၁၀ ပုဒ်ကို ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ Vote လုပ်ပြီး ရွေးချယ်ချင်တယ် ဆိုရင် Read More »
တောင်းလိုက်ကြတဲ့ သီချင်းတွေ တေးသံစဉ်သီချင်းတွေကို မိမိခံစားချက်တွေနဲ့ ကိုယ်တိုင် ဖွင့်ဟ၀န်ခံချင်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် အထူးအစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာ တောင်းဆိုလာတဲ့ သီချင်းတွေကို တယ်လီဖုန်းနဲ့လက်ခံထားပြီးတော့ ဖုန်းဆက်လာတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ခုန်စရာ စကားသံတွေနဲ့အတူ တောင်းဆိုထားတဲ့သီချင်းကိုပါ ယှဉ်တွဲပြီးထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြ
FM Music Show ဂီတချစ်ပရိသတ်တွေနားဆင်နိုင်ဖို့ ဂီတအမျိုး အစားတူ သီချင်းတွေကို စုစည်းပြီး Non Stop ပုံစံနဲ့ တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ တနလာင်္နေ့ ၄ နညရီခွဲ နဲ့ ကြာသပတေးနေ့ ည ၇ အချိန်တွေမှာနားဆင်ခံစားနိုင်ပါတယ်။
သိမ်းဆည်းထားသောပန်းရနံ့များ မြန်မာ့ရိုးရာစကားပုံ၊ စကားထှာ ၊ ဆိုရိုးစကားများကို ကျေးလက်ဓလေ့စရိုက်များနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ အစီအစဉ်ပါ။ တနင်္ဂနွေနဲ့ ဗုဒ္ဒဟူး မနက် ၁၀ နာရီကျော်အချိန်မှာ တင်ဆပ်ပေးနေပါတယ်။
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်များရဲ့ စိတ်ကြိုက်သီချင်းရွေးချယ်မှုအစီအစဉ်ပါ ၊ ဒီအစီအစဉ်ကို အင်္ဂါနေ့နဲ့ သောကြာနေ့နေ့လည် ၁ နာရီ မှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။
The Selector, British Councilacontemporary music programme comes to Myanmar!
A weekly programme that covers all styles of music from indie, dubstep, folk, soul, electro and everything will broadcast through Mandalay FM and Pyinsawadi FM starting3April every Wednesday and Saturday at 9.30 p.m. Read More »
BRITISH COUNCIL RADIO LESSONS TO HELP YOU LEARN ENGLISH
Develop your English Language skills by listening to our "Obla Air" radio series on Mandalay FM and Pyinsawadi FM starting from3April 2013.
နီနီခင်ဇော် - မာရီယို	စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် - ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ	ဖြိုးကြီး - မမုန်းကြေး	N ကိုင်ရာ - Lady ကိုင်ရာ	မြတ်သူအောင် - အခြားတစ်ဖက်	လမ်းမများ	Adam Lambert - Trespassing (Deluxe Edition) (2012)	Beyoncé – 4: The Remix (2012)	John Mayer - Born And Raised (2012)	Pitbull - Original Hits (2012)	Live at The Royal Albert Hall	Lioness: Hidden Treasures	Topten Songs
တကိုယ်တော် Valentine - စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ Bunny Phyo
လွမ်းလွန်းလို. - ရဲရင့်အောင်
ချစ်သူမရှိတဲ့အချိန် - ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း
ငှက်ခလေးလို - ဖြူဖြူကျော်သိန်း
ရက်စက်သွားသူ - နီနီခင်ဇော်
ချစ်တိုင်းလည်းမညား - ဇမ်နူး
အစွန်းနှစ်ဘက် - G Latt
မျက်နှာစာအုပ် - ကိုင်ဇာတင်မုံ
အသည်းကွဲမိုက်ခရိုဖုန်း - နောနော်
1. Jason Aldean - Night Train
2. Brandy - Wildest Dreams
4. Chris_Brown don't wake me up (Clinton_Sparks_Remix)
5.2Chainz - Extremely Blessed (Feat. The-Dream)
6. Alex Clare - When Doves Cry
9. Nicki Minaj - Automatic
10. Swedish House Mafia Feat John Martin - Don't You Worry Child
Get the Flash Player to see this player.Icecast Server & Icecast Hosting
အချစ်ရောင်းသူ - Side Effect	03:07
အဆိပ် - ခင်ဘုဏ်း	04:37
အားလုံးအတွက် - ဖြူဖြူကျော်သိန်း	03:47
ဘ၀ခါး - Reason	03:43
ဒါပဲကျန်တယ် - BIG BAG	02:54
အိပ်မက်ဆိုး - သော်တာချမ်းမြေ့	03:10
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် - Idiots	04:19
မထူးဆန်းဘူး - အဲလက်(စ်)	02:56
အရှုတ်ထုပ် - No U Turn	02:27
စက်ရုပ် - မီးမီးခဲ	04:39
နောက်ထပ် - THE ANTS	04:28
သိုဝှက်တဲ့ကမ္ဘာ - Drive	04:32
ဝေးပြီးတဲ့နောက် - ဂျီလတ်	03:49
ရူးပြီ - Reviver	03:48
လွမ်းလွန်းလို့ - ရဲရင့်အောင်	03:04
နေခဲ့တော့ - ကျော်ထွဋ်ဆွေ ၊ အိမ့်ချစ်	03:22
ကြွေလွင့်တော့မယ် - အိမ့်ချစ်	04:06
အလွမ်း FM - နေနေ	03:47
အိပ်မက်ထဲကမိန်းကလေး - သိန်းလင်းစိုး	03:58
ကိုယ့်ရဲ့ဘက် - ရဲလေး	04:36
ယောင်္ကျားသဘ၀ - ထွန်းထွန်း ၊ လွှမ်းပိုင်	02:34
တစ်ဦးတည်းသော - လွှမ်းပိုင်	05:12
နင်ပြန်လာပါတော့ - ထိန်ဝင်း ၊ ပြည့်ဖြိုးဦး	03:22
ကိုင်းကြီးကြီးမှာနား - စန္ဒီမြင့်လွင်	03:50
ခခယယ - Example (feat.Saw Nyi Nyi)	04:54
မေ့လိုက် - ရဲလေး ၊ ကိကိ	04:06
Mandalay FM Monthly Collection
Mandalay FM Collection (November 2012)
Mandalay FM Collection (October 2012)
Mandalay FM Collection (September 2012)
Mandalay FM Collection 2012 (AUGUST)
Chit Thu Wai Chan Chan Phyo Gyi L ဆိုင်းဇီ အနဂ္ဂ view all »
Try - Pink When Doves Cry - Alex Clare
Today Mandalay FM Schedule
19th December , 2014 Friday Ring Tones
pause Myanmar Countdown 2014 Theme Song
Toatal Download :28493
pause Pan Nu Thway Theme Song
Toatal Download :248723
pause The Model Academy Theme Song
Toatal Download :200783
pause Flowers & Butterflies Theme Song
Toatal Download :250783
pause Myanmar Countdown 2013 Theme Song
Toatal Download :1181270
view all » Daily Schedule
Copyright © 2014, MRTV-4